Nkata nkata vidio nkata
Nwere ike iji igwe okwu ozugbo.
- nke abuo: ọnụnọ nke igwefoto weebụ (ma ọ bụ, na ndị nkịtị - igwefoto vidiyo), nke a na-eji na-anata ma na-ebunye foto, site na usoro nke eserese eserese;
- nke atọ: oghere onwe gị, ọ chọkwara inwe oge ntụrụndụ dị mma maka gị!
Ọ bụghị ụjọ ma ọ bụrụ na ịnweghị otu, n'ihi na ọ gaghị esiri ike ikekwe ịnweta site na iji kọmputa dee ederede site na keyboard site na iji mgbasa ozi agbakwunyere. Lee ka o si bụrụ ihe ọchị ikwu okwu na nkata vidiyo, zipu akwụkwọ ozi ịhụnanya na-enweghị ịkwụsịtụ mgbasa ozi vidiyo.
Nkata nkata - dị ka otu n'ime echiche nke akụkọ na-agafe agafe
A na-ahụta nkata vidio vidio na ụmụ agbọghọ 18 afọ gara aga dị ka ihe pụrụ iche. Ebe ọ bụ na enweghị igwefoto weebụ, igwe okwu na kọmputa ... A na-ahapụ ya ozugbo ka ọ gaa n'ihu mkparịta ụka ahụ ka ịchọrọ. N’ịbụ ndị gosipụtara mmasị n’isiokwu a - obere akụkọ ihe mere eme. "Rulet" videochat - aha a na-ahụkarị ugbu a, mana ị cherela banyere akụkọ ihe mere eme nke aha ahụ? A kọwara nkọwa ya site na ahụ iru ala ya, usoro pụrụ iche nke ọrụ: nchikota nke ikike a na-arụ dị ka egwuregwu nkịtị nke nọmba kwekọrọ. Amaghi ama, mana mgbe ufodu ihe adighi anya. A na-ahọrọ ndị na-emegide ya na-akpaghị aka site na mmemme ahụ, ị ​​jikọọ na onye na-emechi ya. Na-agbanye echiche efu - nwee obi ụtọ a na onye ala ọzọ si n'akụkụ ọzọ, ghọta ihe dị iche na anya - ọ nwere ike ọ bụrụ na ọ ga-abụ kọntinenti.Na oke nke nnukwu anya - ịhụ onye agbata obi ma ọ bụ onye ikwu na ihuenyo ... Egwuregwu adịghị ahụkarị ma kwekọọ na ọnọdụ 1: 100000. Ruru ya peculiarity, a na-akpọ ya "random". Site na oke - lee ka o si nwee obi uto, na uzo ndi ozo, dika egwuru egwu kpochapuru. Ike gwụrụ nke mkparịta ụka a - bido ịchọ nke ọzọ maka twitter, ọ bụrụ na ịchọọghị ya - pịa nyocha ọzọ ruo mgbe ịchọtara ihe ịchọrọ. Ọganihu na-aga n'ihu na usoro ahụ na-adọrọ mmasị, na-enweghị ike ịdọpụ onwe gị. A ụdị egwuregwu, riri ahụ na-akpali akpali. Ọ bụ ihe dị mma ma ọ bụ ịhapụ oge, oge ọsọ ọsọ na-efe. Na-achọ a akụ ebe ị nwere ike na a ihunanya ọnọdụ na mfe iji - a "ukporo mmekọrịta oru ngo" - n'ihi na ị. Mkparịta ụka mba ụwa bụ ihe ịtụnanya mara mma nke ukwuu, na-abawanye ugboro ugboro n’afọ ndị na - adịbeghị anya. Mee ka mmadu mata gi,ibi n'ihu ụwa - ugbu a bụ eziokwu, ịchụso ọkụ ma ọ bụ ọbụbụenyi - enwere ike ịnweta site na kọntaktị mba ụwa. Ihe a na-echefu echefu, nke mmetụta uche, nke nwere uche na mba dị iche iche, ị nwere ike iche, cheta maka ndụ gị niile. Omume na ndị mba ọzọ agaghị efu. Ihe ngosi doro anya ga-ahapụ akara a na-agaghị echefu echefu. Nye ọtụtụ ndị, a ga - enwe nsogbu a na - apụghị imeri emeri - ire ​​olu nke onye na - ekwu okwu. Enwere polyglot ole na ole na ọ na-esiri ike ịmara asụsụ mba ndị ọzọ nke ụwa n'ụzọ zuru oke. Chọta onye ị ga - agwa okwu bụ ihe dị ka sekọnd abụọ, mana ịghọta ihe ọ na - ekwu enwezị nsogbu ... Ọ dị mkpa ka ị kọwaa onwe gị ma kọwaa onwe gị. Ndị hụrụ asụsụ mba ọzọ n'anya ga-enwe obi ụtọ na omume a na-apụghị ịgbanwe agbanwe, ị ga-ekwenye. Ọfọn, maka ugbu a, ka anyị laghachi na mgbọrọgwụ - nnukwu mmadụ chọrọ iche iche na nkata, ọ bụghị imeziwanye ihe ọmụma ha ...ọ ka mma iji ihe ọmụma nke nwa afọ na ọkacha mmasị Russian okwu. Emeela nkata vidio nke oge a maka ndị na-ege ntị. Ebe nrụọrụ weebụ a ga-enweta maka nghọta ga-eme ka o kwe omume ịchọta onye jiri otu asụsụ na-asụ asụsụ gị. Dị ka o kwesịrị ịdị, na nke a, mkparịta ụka na ya ga-aga n'ihu na-enweghị mgbochi ọ bụla. Understandingghọta mmekọrịta dị iche iche na mmata ọhụụ ọhụụ, nnukwu oge ejirila, isiokwu dị iche iche - agaghị ekwe ka ike gwụ gị na nkata vidiyo kachasị amasị gị, mana ọ ga-eweta ọ joyụ, udo ị ga-echeta mgbe ị nọghị na njikọ connectionntanetị.Dị ka o kwesịrị ịdị, na nke a, mkparịta ụka na ya ga-aga n'ihu na-enweghị mgbochi ọ bụla. Understandingghọta mmekọrịta dị iche iche na mmata ọhụụ ọhụụ, nnukwu oge ejirila, isiokwu dị iche iche - agaghị ekwe ka ike gwụ gị na nkata vidiyo kachasị amasị gị, mana ọ ga-eweta ọ joyụ, udo ị ga-echeta mgbe ị nọghị na njikọ connectionntanetị.Dị ka o kwesịrị ịdị, na nke a, mkparịta ụka na ya ga-aga n'ihu na-enweghị mgbochi ọ bụla. Understandingghọta mmekọrịta dị iche iche na mmata ọhụụ ọhụụ, nnukwu oge ejirila, isiokwu dị iche iche - agaghị ekwe ka ike gwụ gị na nkata vidiyo kachasị amasị gị, mana ọ ga-eweta ọ joyụ, udo ị ga-echeta mgbe ị nọghị na njikọ connectionntanetị.
Anyị ga-achọ ịdọrọ uche gị gaa na mkparịta ụka vidiyo kachasị ama ama, nke ịntanetị Russia - nkata roulette. Oge na-atọ ụtọ nke ukwuu, yana ọrụ dị elu nke saịtị ahụ, ga-eme ka ọ dị gị ka onye a hụrụ n'anya, onye dị mkpa n'ụwa. Ndị ọhụụ ọhụụ ga-enwe ọ toụ ịhụ gị ọzọ na mgbasa ozi vidiyo, na ihu. K throwduọk ukpeme ke ibuot fo. Atụkwasịla ndị bịara abịa obi. Banyere ọrụ ahụ, anyị nwere obi ụtọ ịhụ gị ma nyere gị aka idozi nsogbu ọ bụla gbasara arụmọrụ nke ọrụ ahụ.
Iji zere ọdịda ọdịda ọjọọ nke ọnụnọ nke ụdị na ebumnuche ọjọọ - ịmalite nkwukọrịta, tupu iji nkata vidiyo - gafere ndebanye aha dị mfe. Ọ gaghị ewe ọtụtụ oge, echegbula onwe gị. Kama nke ahụ, ọ ga-eme ka usoro mmekọrịta na mkparịta ụka dị mfe. Ekwetaghị ya - wee gaba na imewe ugbu a iji jide n'aka.
Atụmatụ na arụmọrụ dịgasị iche iche nke nkata
Mkparịta ụka vidio vidio - nkasi obi na nkasi obi dị mfe na omume kacha nta nke ndị na-ekwurịta okwu na ya. I nwere ikike ide ozi, ọ masịrị ndị na-elekọta mmadụ. netwọk ma ọ bụ ICQ na Skype mmekorita. Na ụkpụrụ, ọtụtụ mmadụ na-ahụta ọzọ na-adịghị mkpa gbakwunyere - ohere dị mma iji chekwaa akụkọ ozi. Mgbe ịnọghị ogologo oge - ị "gafere" ederede nke mkparịta ụka ahụ wee cheta ihe gị na onye debanyere aha gị kwuru banyere oge ikpeazụ.
Maka ndị chọrọ ikori, enwere ike ijikọ igwe okwu. Girlszọ ụmụ nwanyị na-aja aja mma maka mkparịta ụka. Ha hụrụ n'anya "ịda na ntị ha" - echekwara m na nke a abụghị akụkọ. Mkparịta ụka na-ekpo ọkụ bụ oge ejiri ebube na-erite uru. Nke a ga - eme ka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ịntanetị dị ka o kwere mee na nke dị adị. Ikike ịhụ onye ị na-agwa okwu bụ nnukwu uru, mana n'eziokwu ọ na-efu ihe ọ bụla na-enweghị olu, ntị na ihuenyo ahụ dị omimi ... aringnụ ụda olu, okwu asụsụ na ụda olu - ị nwere ike ịchọpụta nke ọma, ghọta agwa, ịkọ echiche.
Ndị ọkachamara agbaala mbọ bulite njirimara ọrụ nke akụ na ọkwa kwesịrị ekwesị, iji mee ka ndị maara nke ọma site na ịgbakwunye onye ọrụ na ndepụta ndị enyi (ọ bụrụ na ị nwere ụdị ọmịiko maka onye na-agwa gị okwu ma nwee agụụ ịme mkparịta ụka) ugboro ugboro ma ọ bụ nanị achọghị ịhapụ aka gị na onye ahụ). N'okwu a, ọ bụ elementrị iji chọpụta mgbe onye debanyere aha ga-akpọtụrụ ọzọ iji maliteghachi nkwukọrịta na ya. N'otu aka ahụ, dịka na ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe - anyị nwere ohere ịgbanwee onyinye. Ihe achọrọ bụ ịzụta mkpụrụ ego kwalite asụsụ ọma. Igosipụta ịhụnanya n'ụzọ dị otú a bụ mmegharị kachasị elu, na gburugburu ebe dị warara. Ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike inye onye ahịa na-akparịta ụka na vidiyo, ebe ọ bụ na ọ bụghị mmadụ niile nwere ike imesapụ aka, ihe ùgwù dị otú a na-atọkwa onye e nyere onyinye a ụtọ. Eziokwu nke mmetụtaEkele maka ihe dị mkpa ma ọ bụ naanị iji mee ka mmadụ nwee nkasi obi.
Ozi vidio edere na ọnụ ụzọ ga-aghọ usoro a na-adịghị ahụkebe. Nke a bụ ụdị avatar vidiyo, nke ị na-ewebata onwe gị, gwa ntakịrị banyere onwe gị, nwee mmasị na onye na-ekiri "vidiyo avator". Gwapụta mmetụta gị, egbula oge ịgwa igwefoto banyere uru na ọghọm gị, gbasara ihe ndị ị chọrọ ga-abụrịrị onye ga - eme n'ọdịnihu. Ma obu gosiputa onwe gi.
Iji gosipụta afọ ojuju gị - pịa interface nke ihuenyo "mee otito" - ị ga-agba onye iro gị ume. Yabụ, ị ga-egosi nnabata, ị ga-enwe ike igosipụta nkasi obi na ọmịiko, nke, dabara na nke a, kwesịrị ịme ozugbo nzaghachi. Enwere ike igosi mmeghari a n’ọnọdụ ọ bụla dabara adaba: echiche gosipụtara n’ụzọ na-atọ ọchị, ngosipụta nke onyinye nwere ọgụgụ isi, ọrụ ọ bụla na-adọrọ mmasị nke metụtara n’ebube dị ebube nke okwu ahụ “ịda.”
Echefula na eziokwu ahụ bụ na ọ nwere ike igosipụta ihe na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ekwenyeghị, enweghị mgbaghara, mmebi doro anya nke ntuziaka nkata vidiyo - tinye akwụkwọ mkpesa n'oge ọ bụla. Na mgbakwunye na eziokwu ahụ na onye na-eme mkparịta ụka ga-aghọta na ha ezighi ezi, anyị ga-enwetakwa mkpesa ma anyị ga-atụle ya ma mee ihe ozugbo. Anyị ga-enwe ekele maka enyemaka gị n'ọgụ a na-alụso ndị na-emebi iwu, yabụ anyị ga-echebe nkata vidiyo site na ndị na-adịghị mma ndị na-anaghị asọpụrụ onwe ha na usoro guzobere, na karịa karịa - ha na-akpasu gị iwe dị ka mmadụ.
Na mbido (ekwuruworị n'elu) - a tụrụ aro ịdebanye aha. Ọrụ a bụ ịbịpụta na ide n'ọhịa akọwapụtara "aha otutu" - aha na nkata, nke ha nwere ike mata. Ọ dịghị mkpa ide aha na aha nna gị - o zuru ezu iji aha na-atọ ọchị, aha nke ị rọrọla ogologo oge, aha njirimara nke anụmanụ ị hụrụ n'anya - n'ozuzu, nke enwere ike ịgụta. Aha aha mbụ na-echefu echefu bụ nkwa nke na a gaghị echezọ gị ma chọta mgbe oge gachara. Na saịtị ahụ - ị nwere ike ịbụ onye na-enweghị aha na echegbula na roulette nkata vidio.
Adịghị amasị anya nke interface? Na-anọrọ ntọala ntọala maka ngosipụta na mpụga, agba gamut, họrọ agba ndị ahụ biko, egbochila. Asụsụ na ngosipụta ya nwere ike ịtọ na uche ha, ha na-eji Russian, mana nhọrọ dị n'aka gị, dịka ha na-ekwu. Iji nkata vidiyo na-enweghị usoro ga-eweta ọ joyụ kachasị, ma ọ bụrụhaala na ị nọ na gburugburu ebe achọrọ ma dị mma!
Roulette video nkata mmemme
Ihe dị mkpa maka ịtụle mmemme ọ bụla ma ọ bụ ọrụ ọ bụla bụ ogo nke usoro ha na ederede ha. Yabụ, maka njikwa kachasị mma maka mmemme ahụ, ọ dị mkpa ka arụ ọrụ ya n'ụzọ zuru oke dịka o kwere mee. Echefukwala na ndị ahịa na-eleta akụrụngwa - ịkwesịrị ịgafe nsogbu na ọdịda na-eme, ọ ka mma igbochi omume ha. A na-echekwa cha cha vidio vidio anyị na ngwanrọ mgbochi ọgbara ọhụrụ kachasị ọhụrụ, nke na-agaghị ekwe ka hacking sistemu anyị. Ndebanye aha nke iwu - ndị nwere obi abụọ na echiche ọjọọ - na-asọ oyi. Ha egosighi ochicho ka aghara ha n’efu ma hapu ibe ha, si otua hapu ikori vidiyo ka ichota “uru” karie. 99% ka ị nwee ike zuru ike na gburugburu ebe nchekwa ma tinye onwe gị n'ịchọta ihe ọma. Enweghi nsogbumkpakọrịta nwoke na nwaanyị na ọnọdụ zuru oke - nke a bụ ọgwụgwọ maka owu ọmụma anyị na-enye ndị ọbịa anyị.
Mgbe ị na-agafe usoro ahụ, ndị ọbịa gosipụtara nkwenye ha na iwu onye ọrụ. Ọ bụrụ na ị kwenyere na nkwekọrịta ahụ, mgbe ahụ ị kwenyere ịkpa agwa n'ụzọ kwesịrị ekwesị na ịza ajụjụ maka omume gị, iji nwee ezi uche kwekọrọ n'ụkpụrụ omume niile. Site n’akụkụ anyị - anyị na - ekwe nkwa nzuzo nke ozi ị kwupụtara. Ọ bụkwa ọrụ dịịrị anyị iji hụ nkasi obi nke nkata vidiyo anyị.
Ndụmọdụ sitere na Videoruletka.in.ua: Otu esi atọ ndị ọzọ ụtọ.
Anyị chọrọ ime ihe ga-atọ ndị nọ anyị nso ụtọ. "Gịnị ka ọ ga-enye?" - mmadụ ga - ajụ. Azịza ya dị mfe: ọ ga - enyere aka n'ịchọta ọrụ, chọta ndị odide ịtụnanya ga - abụ ndị enyi na ndị enyi n'ihi mkparịta ụka; ọ dịghị onye na-enweghị nsogbu na mberede "na-akụda obi", ebe ọ bụ na ọkara nke abụọ ga-ezute anyị - ee, enweelarị ikpe ndị dị otú a, anyị ga-akọwa akụkọ ole na ole n'okpuru - igosi ihe atụ site na ndụ. Mee mkparịta ụka ahụ nke ọma, gbalịa ige ntị na "ịnụ", na-amụmụ ọnụ ọchị ma jiri obiọma zaghachi onye na-agwa gị okwu. Ewoo, ọ bụghị isiokwu niile na-eme omume n'ụzọ ziri ezi n'ọnọdụ ndị dị otú a ... ihe ị ga-eme? Olee otú-amasị ya? Azịza: omume na omume ndị ọzọ!
Ga-aghọta mgbe ị ga-ekwupụta otu uche ma ọ bụ, na ntụle, ịgbachi nkịtị.
1) Nkwupụta echiche ihere, okwu dị jụụ ma dị nkenke ... kedu ihe ị chere - nke a ga-amasị ihu na n'akụkụ nke ọzọ nke ihuenyo ahụ? Ọ maara? - "Ntuziaka": ịmalite ịmụ okwu, ịkpọ okwu na olu. Cheta: ị kwesịrị ịnụ! I kwesịghị ịtụ egwu, gbalịa ịga agba egwú, karaoke - nye mkpụrụ obi gị nnwere onwe! Ya mere, ị ga-enweta obi ike ma nwere onwe gị.
2) N’aka ozo, oke okwu? Ndị enyi ha na-akọcha ma ọ bụ na-ezere ndị enyi? "Okwu mmechi": kwusi na mkparịta ụka, mụta inwe mmasị n'ihe omume nke ndị njem. Gee ntị, jụọ ajụjụ - si otú ahụ mee ka ha kwuo okwu. A na-akpọ ndị gbara gị gburugburu ka ha ghọta na ị nwere mmasị na ị nweghị mmasị na ha. Ndị hụrụ n'anya kọọ ihe, egeghị ntị. Ọ bụrụ na emeghị ihe - naanị ndị na - ege ntị ga - abụ ... Ee - gị onwe gị.
3) "Ntuziaka" - nchoputa n 'uwa ... Mgbe enwere ma obu enweghi ihe - gosi. Kwere m - ọtụtụ bụ "manụ". Onye ọ bụla nwere isi nke ya ma anaghị agbasa ndụmọdụ. Don'tchọghị, mana ị na-ehi ụra na ndụmọdụ bara oke uru. "Nye": Setịpụ ihe mgbaru ọsọ: ọ bụrụ na ị nye mmadụ ndụmọdụ, mgbe ahụ naanị mgbe ọ dị mkpa, ọ bụrụ na onye mmegide ahụ n'onwe ya jụrụ. Ya mere, ha ga-enwe ekele maka ya - n'ụzọ ọ bụla!
4) you na-ekwubiga okwu ókè ma ọ bụ ị nwere ike ịchọ okwu gị mma? Nwere ike inwere anyaụfụ nke akụnụba? Chee echiche, n'ime mmụọ a, n'oge na-adịghị anya ị ga-ahụ nkwenye. "Nkwanye": Anwala iduhie onye na-ekwu okwu. Mesie ya ike na nke a bụ akụkọ ifo, naanị ịkpa ọchị. Mana ọ bụrụ n'ụdị ị na - eme mkparịta ụka "na - amịnye gị" - na - achọpụtaghị, ị ga - abụ onye na - agba ọsọ. Dị ka o kwesịrị ịdị, nke a ga-agwụ ike - gbalịa ịhapụ echiche efu doro anya nke nta nke nta ma ghọta mgbe ị ga-achị ọchị, mgbe ọ ka mma izere mmụọ.
Free nkata vidiyo Russia - dịịrị onye ọ bụla
Anyị ji n'aka na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla echeghị banyere ụgwọ nke ijigide ihe nkesa na akụrụngwa ndị ọzọ mgbe ị na-ebudata ngwanrọ ahụ. Achọrọ m nkata vidiyo ka ọ ghara ịkwụ ụgwọ maka ha. Ma cheedị - otu nde mmadụ na-ekwurịta okwu na akụ ha, ha ga-arụ ọrụ na-enweghị nkwụsị, na oke mma. Nnukwu uru nke nkata vidiyo bụ nnwere onwe iji mee ihe, nke anyị na-enye. Enwere ọtụtụ ọnụ ụzọ maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ụdị nkata niile, ọgbakọ, mana ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ. Dịka ọmụmaatụ, ịnyefe ego site na ịkwụ ụgwọ eletrọniki ma ọ bụ izipu SMS, mana n'agbanyeghị otu ị si ele, nke a bụ eziokwu. Ugbu a, ka anyị tụlee onyinye anyị - a na-enye gị nkata vidiyo ọhụụ nke ogo dị elu! Kwesighi ịkwụ ụgwọ ọ bụla maka oge nke gị. Ntụrụndụ na-atọ ọchị, nke a na-esonyere ya, na-enweghị ntinye ego.
Nweta nkwanye ugwu zuru oke na ịntanetị. Mkparịta ụka vidio vidio na-ewebata ọrụ, melite mmemme - maka mma. A chọrọ ihe enyemaka kwa ụbọchị site n'aka ndị bi n'ọtụtụ mba (na mkpokọta, ihe karịrị nde 1)! Ọnụ ọgụgụ ndị e debara aha na-abawanye kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị na-aga kwa ụbọchị, ị nwere ike izute ihu ọhụrụ na nke ọhụrụ! Ga-ezute ndị nwere otu obi na-akwado gị na echiche gị; ị ga-ekwurịta okwu na-atọ ụtọ, esemokwu. Gịnị bụ isiokwu nke video nkata? Ee, ọ bụghị nke ọ bụla! Inweta isiokwu dị iche iche bụ gbakwunyere. Enweghi mgbochi na olu ederede ederede na usoro ntụgharị okwu, enweghị koodu ejiji ma ọ bụ usoro ndị ọzọ achọrọ. Zuo ike ma nọrọ naanị gị, zute ma nwee obi ụtọ. Ndụmọdụ anyị nyere gị bụ mmuta na ịda mba. Iji kwuo okwu n'otu ụzọ ahụ dị ka eziokwu, iwu nke mkparịta ụka nkwanye ugwu bụ otu ebe niile:erudition, agụmakwụkwọ, okwu ziri ezi kwuru - nke ahụ bụ ihe enwere ekele maka ya niile. N’igosipụta onwe gị dị ka onye pụrụ iche na onye pụtara ìhè, gosi onwe gị dị ka onye nwere ezi obi na imeghe, na-eme ka o doo anya na ị naghị enwe nkụda mmụọ ịgwa. Andmụbawanye gị video nkata gburugburu. Mana isi ihe na - anọgide - ịghara ime ka ị bụ ụdị dị iche, ka ị bụrụ onwe gị.
Iji nkata vidiyo ahụ, chee na onwe gị na ọzụzụ banyere izizi nke "omume na ọha mmadụ". N'eziokwu, ị bụ onye ihere ma na-ala azụ igosi onwe gị, ị marala ya ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eji saịtị anyị na mmeghachi omume ya n'ụzọ zuru ezu, ị nwere ike ịzụ onwe gị n'ụzọ dị mfe na nka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ghọta ụkpụrụ nke omume na ndị na-amaghị. Ahụmahụ a na-apụghị ịgbanwe agbanwe ga-abụ "nkuzi" magburu onwe ya na ezigbo ndị maara. Ga-eche echiche nke ọma na ị ga-ahụ ihe isi ike ndị ị meriri na omume - a gaghị enwe ihe mgbochi ọ bụla. Omume dị mma maka mmadụ. Ọ ga-abụ ọ bụghị naanị usoro mmụta, kamakwa ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ iji oge ezumike na ụlọ ọrụ na-atọ ọchị. Gị na ndị ezigbo mmadụ ịkparịta ụka ga-eme ka ị nwee ọ joyụ, obi ụtọ, na uru ọ bara ịkparịta ụka. Ikwu okwu na nkata vidiyo - ị ga-enwe ohere ịgbanahụ nchegbu kwa ụbọchị,nke na-agwụ ike.
Nkwukọrịta Intaneti na-enye ohere ikwupụta onwe gị, kpam kpam. Otu akụkọ banyere onwe gị na ndụ na-adọrọ mmasị - ga-atụfu arịlịka nke owu ọmụma site na mkpụrụ obi. A ga - eji mmasị gee akụkọ ọ bụla - ma gwa ya ndị emelitere emelitere - ị ga - ahụ ihe ngosi sitere n'ike mmụọ nsọ oge ọ bụla. Kesaa nsogbu gị, rịọ maka nduzi, rịọ maka nkwado omume - ị ga-enwekwa omume enyi (ọ bụrụ na ị tụkwasịrị obi, n'ezie). Ọ ka mma "wụpụ mkpụrụ obi" na agwa onye na-amaghị, ịnọ ebe dị anya - nke bụ ihe ịtụnanya. Gaghị akwụ onye ọ bụla ụgwọ. Mana biko echefula na enwere usoro ntụkwasị obi. Otu ihe ahụ - ị maghị kpamkpam, n'ọnọdụ ọ bụla, ịchọrọ ịmara ya nke ọma.
Nzuko "nkpuru obi" na nkata vidiyo - akuko ma obu eziokwu?
Ọ na - adịkarị otu a: ndị mmadụ na - achọta onye ọlụlụ na ntanetị na ntanetị. Ọtụtụ ihe atụ, mgbe ihe ịga nke ọma pụtara na amongntanetị n'etiti ndị ọrụ, ghọrọ nzukọ na-adị adị n'ezie. Mmekọrịta dị otú ahụ nwere, dịka iwu, naanị ụzọ: ịga n'ihu, itinye aka na n'ikpeazụ - alụmdi na nwunye. Ihe karịrị narị otu narị puku ezinụlọ nọ n'ụwa dị iche iche site na nkà na ụzụ ọhụrụ. Onye ọ bụla nwere ike ịdaba n'ịhụnanya site na iji saịtị mkpakọrịta nwoke na nwanyị, ọgbakọ ma ọ bụ nkata vidiyo dị ka ụzọ ebughi ụzọ. Ọ bụrụ na enwere mmetụta nke owu ọmụma, eyigharịla ihe ị ga-eme ugbu a ruo echi - kwenye na ike gị, jiri nlezianya gakwuru ọchụchọ maka onye ibe / ibe. Anyị ga-enyere aka dị ka ike kwere anyị; ị nwere ike iji saịtị anyị zuru oke. Ezubere mkparịta ụka mkparịta ụka maka ọkọlọtọ, ehihie na abalị (anyị kwuru na mbụ - enwere ike inwe ezigbo ndị ezigbo uche, ndị enyi).Ndị a abụghị naanị okwu, kwere m, ihe niile dị adị! Ohere di na olile anya kasịnụ! Apụghị ya na mbido ndụ ọhụụ yana nke masịrị gị bụ ma ị ga-abụ onye ọrụ mkparịta ụka vidiyo Russia-ewu ewu ma ọ bụ na ị gaghị? O nwere ike ịbụ na onye ọbịa dị otú ahụ bụ onye na-eme ebere dị ka gị na-enweghị mkpebi n'anya ya - ọ jupụtara n'ọhịa nke ajụjụ a, na-enwe olileanya izute mmụọ nke mmụọ, ọkụ ga-apụta n'anya ya, a ga-enwe ihe ọzọ ị ga-ahụ n'anya onwe ya ụwa. Isi ihe abụghị ifegharị aka gị na okwu nzuzu: "nke a anaghị eme" - ị maara? Nwaleenụ ọdịnihu gị. O yikarịrị, ọ bụrụ na ị gafee ọganihu, akara aka ga-abịakwute gị na ndị otu egwuregwu dị mma nke ọrụ anyị ga-ebuli otu iko mmanya dị ụtọ, nke na-atọ ụtọ, nke na-acha ọcha maka ezi ahụike, ọdịmma ezinụlọ ...Apụghị ya na mbido ndụ ọhụụ yana nke masịrị gị bụ ma ị ga-abụ onye ọrụ mkparịta ụka vidiyo Russia-ewu ewu ma ọ bụ na ị gaghị? O nwere ike ịbụ na onye ọbịa dị otú ahụ bụ onye na-eme ebere dị ka gị na-enweghị mkpebi n'anya ya - ọ jupụtara n'ọhịa nke ajụjụ a, na-enwe olileanya izute mmụọ nke mmụọ, ọkụ ga-apụta n'anya ya, a ga-enwe ihe ọzọ ị ga-ahụ n'anya onwe ya ụwa. Isi ihe abụghị ifegharị aka gị na okwu nzuzu: "nke a anaghị eme" - ị maara? Nwaleenụ ọdịnihu gị. O yikarịrị, ọ bụrụ na ị gafee ọganihu, akara aka ga-abịakwute gị na ndị otu egwuregwu dị mma nke ọrụ anyị ga-ebuli otu iko mmanya dị ụtọ, nke na-atọ ụtọ, nke na-acha ọcha maka ezi ahụike, ọdịmma ezinụlọ ...Apụghị ya na mbido ndụ ọhụụ yana nke masịrị gị bụ ma ị ga-abụ onye ọrụ mkparịta ụka vidiyo Russia-ewu ewu ma ọ bụ na ị gaghị? O nwere ike ịbụ na onye ọbịa dị otú ahụ bụ onye na - eme ihe dịka ị na - emeghị mkpebi n'anya ya - ọ jupụtara n'ọhịa nke ajụjụ a, na-enwe olileanya izute mmụọ obi, ọkụ ga-apụta n'anya ya, a ga-enwe ihe ọzọ ị ga-ahụ n'anya onwe ya ụwa. Isi ihe abụghị ifegharị aka gị na okwu nzuzu: "nke a anaghị eme" - ị maara? Nwaleenụ ọdịnihu gị. O yikarịrị, ọ bụrụ na ị gafee ọganihu, akara aka ga-abịakwute gị na ndị otu egwuregwu dị mma nke ọrụ anyị ga-ebuli otu iko mmanya dị ụtọ, nke na-atọ ụtọ, nke na-acha ọcha maka ezi ahụike, ọdịmma ezinụlọ ...na onye nleta di otua bu onye nnabata dika gi onwe gi n’enweghi mkpebi n’anya ya - o juputara n’ubi ajuju ajuju ajuju, na-enwe olile anya ihu otu mmuo, enwere ike n’ile ya anya, enwere ihe ozo putara na ihu onwe ya n’anya n’uwa. Isi ihe abụghị ifegharị aka gị na okwu nzuzu: "nke a anaghị eme" - ị maara? Nwaleenụ ọdịnihu gị. O yikarịrị, ọ bụrụ na ị gafee ọganihu, akara aka ga-abịakwute gị na ndị otu egwuregwu dị mma nke ọrụ anyị ga-ebuli otu iko mmanya dị ụtọ, nke na-atọ ụtọ, nke na-acha ọcha maka ezi ahụike, ọdịmma ezinụlọ ...na onye nleta di otua bu onye nnabata dika gi onwe gi n’enweghi mkpebi n’anya ya - o juputara n’ubi ajuju ajuju ajuju, na-enwe olile anya ihu otu mmuo, enwere oku n’ile ya anya, enwere ihe ozo putara na ihu onwe ya n’anya n’uwa. Isi ihe abụghị ifegharị aka gị na okwu nzuzu: "nke a anaghị eme" - ị maara? Nwaleenụ ọdịnihu gị. O yikarịrị, ọ bụrụ na ị gafee ọganihu, akara aka ga-abịakwute gị na ndị otu egwuregwu dị mma nke ọrụ anyị ga-ebuli otu iko mmanya dị ụtọ, nke na-atọ ụtọ, nke na-acha ọcha maka ezi ahụike, ọdịmma ezinụlọ ...akara aka ga-abịakwute gị na otu ìgwè dị mma nke ọrụ anyị ga-ebuli iko nke ihe ọ sweetụ ,ụ na-atọ ụtọ, nke na-atọ ụtọ, mmanya na-acha ọcha na-acha ọcha maka ezi ahụike, ọdịmma ezinụlọ ...akara aka ga-abịakwute gị na otu ìgwè dị mma nke ọrụ anyị ga-ebuli iko nke ihe ọ sweetụ ,ụ na-atọ ụtọ, nke na-atọ ụtọ, mmanya na-acha ọcha na-acha ọcha maka ezi ahụike, ọdịmma ezinụlọ ...
Vidio nkata vidio bụ ebe maka nkwukọrịta obi ụtọ
Imefu oge ezumike n'ụzọ dị otú a, mgbe ụbọchị siri ike nke jupụtara na mmetụta uche, ka mma karịa ileba anya na mgbatị mara mma na amaghị ihe ị ga-eme mgbe ị na-agwụ ike. Have nwere ohere dị ukwuu iji zute ndị mara mma, ndị mara mma na-enweghị ịhapụ ụlọ gị. Ọnọdụ jọgburu onwe ya, nke jọgburu onwe ya, enweghị ike ịga ije n'èzí, mana mkpụrụ obi kwesịrị ịhapụ ya ka ọ zuo ike, zuo ike ... Na n'okporo ámá enwere ihu igwe na-adịghị mma, slush, mmiri ozuzo, okpomọkụ ... Enwere ọtụtụ kama ọnwụnwa nhọrọ - ma gaa ụra ma ọ bụ mepee weebụsaịtị anyị site na ịpị aka abụọ nke òké. Na-ekwurịta okwu, nwee ndị enyi ọhụrụ, ihe bụ isi abụghị ịnọ ọdụ n'efu na mgbidi anọ, na-egbusi oge gị ọka na TV TV, nke ị na-elele oge ọ bụla n'efu. Ọ ga - aghọ ezigbo ihe ma na - atọ ụtọ site na mbido - ị ga - ahụ ndị enyi n'akụkụ. Ha ga-eche na ha hụrụ n'anya ma ọ bụ nnukwu mgbanwema ọdịghị onye nwere ike ịgwa ya na ha mikpuru n’ime Intanet. Naanị afọ ole na ole gara aga - ị naghị eche maka onyinye ị ga-ezute. Etu ị ga-esi guzobe kọntaktị na ndị ala ọzọ site na narị otu narị puku kilomita, mgbe ị na-ahụ ibe ha? Na-enweghị ahapụ gị ulo - ị pụrụ ịnụ ụtọ oge gị dị nnọọ iji random video nkata.
Site n'ụzọ, echetaghị m ma anyị kpebiri ilekwasị anya na usoro a. You gaghị ahapụ ụlọ nke gị. Anyị nwere ike ịkwado gị nkata vidiyo jiri obi ike, nlekọta na nnọgidesi ike! Enweghị ụgwọ ndị ọzọ dịnụ maka ụzọ ma ọ bụ ụgwọ, opekempe nke oge, mbọ, ume - na mkpịsị aka gị. Mgbe mgbatị ahụ gasịrị, ike gwụrụ gị ịga ebe ọ bụla, mana na mpaghara gị, mgbe ụdị mara mma, nke mara mma, nke na-adọrọ adọrọ ga-adọta ndị mmadụ n'akụkụ nke ọzọ nke ihuenyo ahụ, ị ​​ga-ahụrịrị ya, nri? Onye na-ekwu okwu a ga-enwe mmasi ka enyi a wuru nke oma na-amụmụ ọnụ ọchị na igwefoto. Ọ dịghị onye ga-achọpụta na ị na-eji otu ụkwụ, ma ọ bụ na ị dọtara akwara ... A notụghị kọfị. Okpomọkụ? O siri ike ikwu. Ọ dịghị onye ga-enwe ike ibunye ọrịa. N'ezie, nke a bụ ọganihu na ụwa! Izute na-enwe obi ụtọ!
Ọhụrụ nkata vidio Russia sitere na ndị mmepe nwere ahụmahụ
Saịtị ebe ị nọ ugbu a bụ Videoruletka mebere ya, yana ngwa a bụ nke Incorporated nke Badanga Limited., Tel. +66865819983. Largelọ ọrụ a nwere ndị ọkachamara nwere ahụmahụ na teknụzụ na ngwanrọ (ntanetị (sụgharịrị site na asụsụ mmemme: ngwanrọ). Ezigbo uru bụ ndị ọrụ, amamịghe, ihe ọmụma banyere azụmaahịa ha - ahapụla enweghị mmasị na ọrụ ha. Ekele maka ịrụsi ọrụ ike, mgbalị - taa anyị nwere ike ịnụ ụtọ arụmọrụ dị elu nke ngwa: videochat. A ga-achọpụta ọchịchọ iji meziwanye ọrụ ndị ahịa. A na-arụ ọrụ ahụ kwa ụbọchị, a na-ahụ mgbanwe ọ bụla kwa ọnwa 2-3. Ọ bụrụ na, mgbe ị na-ahọrọ ndị klas maka ntụrụndụ, anya gị dabara na nkata vidio anyị, mgbe ahụ ị ghọtara ọrụ dị elu, ịdị mfe nke iji.Ọrụ anyị na-enye mmesi obi ike na ị ga-eji naanị ọrụ dị elu, lelee usoro ọrụ nke saịtị ahụ nke ọma na uru bara uru. Videoruletka - onye na-eche banyere ihe oyiyi ha na mmetụta nke ndị ọbịa ha. Jide n'aka na ị na-eji naanị ọrụ ọrụ ejiri n'aka nke ndị mmepe a tụkwasịrị obi bụ ndị na-erubere nkwekọrịta onye ọrụ.irubere nkwekọrịta onye ọrụ.irubere nkwekọrịta onye ọrụ.
Amachibidoro iji mkparịta ụka vidiyo na roulette ma ọ bụrụ na ị rughị afọ 13.
You bụ afọ 18? Mgbe ahụ, ọ bụrụ na ndị mụrụ gị ma ọ bụ ndị na-elekọta gị ekwenye, i nwere ike
nọrọ na saịtị anyị.
A machibidoro inyefe ọdịnaya ezighi ezi.
Nkata roulette KuMit - kpara ụmụ agbọghọ site na kamera weebụ
Na-achọ ụzọ dị ngwa iji zute nwa agbọghọ mara mma ma mara mma? Mkparịta ụka ntanetị roulette CoMeet (asụsụ Bekee nke CooMeet) na-enye gị ohere isoro ụmụ nwanyị si mba dị iche iche kwurịta okwu na-ahapụghị ụlọ gị. Ozugbo njikọ, elu-edu elu-definition video oku, enweghị nchekasị na naanị ndị kasị mma interlocutor ndị mgbe niile na-amụmụ ọnụ ọchị.
Anyị maara otu oge bara uru taa: a na-amanye anyị ibute ụzọ, chekwaa ma gbaa ọsọ, ma anyị enweghị oge iji mee ihe niile anyị zubere. N’ọgba aghara a, mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na mmekọrịta ya na-adịkarị n’okpuru. Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke Kumit na-ekwe nkwa nkwukọrịta dị elu naanị na ụmụ agbọghọ nwapụtara - nzukọ ịntanetị, ndị ọhụụ ọhụrụ na ezigbo ọnọdụ.
Naanị otu pịa na usoro nwere ọgụgụ isi anyị ga - ejikọ gị na otu puku puku ndị ala ọzọ mara mma. Jide n'aka, ụmụ agbọghọ niile bịara ebe a iji zute, kwukọrịta ma wuo mmekọrịta. Enweghị ọrụ ọzọ n'efu nwere ike ịnye otu ọkwa dị elu dị ka nkata QMIT:
nhazi aka nke nwa agbọghọ ọ bụla edere aha;
mkpebi ngwa ngwa banyere ọnọdụ ọ bụla agbagha;
ngosi ziri ezi maka mmebi ọ bụla nke iwu nkata roulette;
mmepe na mmelite nke arụmọrụ saịtị.
Omegle kacha mma na ChatRoulette ọzọ
Onye ọ bụla nwere mmasị na ntanetị n'ịntanetị nwere ike icheta mkparịta ụka ndị ahụ nke malitere na mmalite nke nkwukọrịta nzuzo. Ndị a bụ Omegl na ChatRulet, nke pụtara na 2009. Onye mbụ si mba ọzọ bịakwute anyị, nke abụọ bụ ụbụrụ nwa akwụkwọ Russia bụ Andrey Ternovsky.
Ihe ntanetị weebụ abụọ ahụ dabere n'otu ụkpụrụ ahụ: nkwurịta okwu na ndị na-emegharị ihe na-enweghị isi sitere n'akụkụ ụwa niile. Ọ bụ ezie na Omegle nwere mmalite nke ọtụtụ ọnwa, ọ bụ ChatRoulette na-achịkwa ihe ngosi ahụ ogologo oge. Agbanyeghị, nkata abụọ ahụ mechara nwee otu “ọrịa” ahụ, nke ka bụ nsogbu na-akụda ọtụtụ ndị aka iji ha.
Nke a, n'ezie, ọdịnaya na-ekwesịghị ekwesị. N'ime ụwa zuru oke, ndị ziri ezi na ndị enyi kwesịrị ịbanye na roulette vidiyo, ndị chọrọ ịmatakwu, nkwukọrịta, ma nye ibe ha nnukwu ọnọdụ. N'ezie:
nnọọ mgbe ị na-ahụ onwe gị na exhibitionists na-achọ na-egosi apụ ha nkịtị kpọkwara ka a nkịtị interlocutor;
nwa agbọghọ mara mma nwere ike ịbụ onye nnọchianya nke ọrụ oge ochie nke na-enye ọrụ chiri anya;
njikọ na-esote ga-enye gị ohere iji nwee ọ aụ static oyiyi ma ọ bụ vidiyo na kpere mgbasa ozi ọdịnaya. Ee, ndị mmadụ enweghị ike ịjụ echiche efu.
Mgbe ahụ ọ bịara doo anya na anyị chọrọ ezigbo ụzọ ọzọ - nkata vidiyo na-enweghị usoro, na-abanye na nke ị na-enweghị ike iche gbasara onye ga-anọ n'akụkụ nke ọzọ nke ihuenyo ahụ. N'ihu otu n'ime mkparịta ụka vidio a bụ Kumit.
Ọ bụ imeru ihe n'ókè nke ndị sonyere na usoro emere n'oge maka mmebi ọ bụla ghọrọ ihe ngwọta maka nsogbu mgbu nke ọrụ ndị yiri ya. Site na mbido, anyị ghọtara nke ọma na ọ gaghị ekwe omume ịtụkwasị obi na akpaaka nke usoro a - anyị chọrọ ọrụ mmadụ dị elu ka ndị ọrụ wee ghọta uru na uru nke saịtị ha na-eji. Ma mgbalị ndị ahụ akwụ ụgwọ.
Taa - Kumit bụ otu n’ime mkparịta ụka weebụ kachasị mma ma dị nchebe. Na onye ọ bụla nwere ike ijide n'aka na nke a. Naanị pịa "Malite Nchọgharị" ma nwaa ịgba chaa chaa n'ịntanetị na ụmụ agbọghọ n'onwe gị.
Mostmụ agbọghọ kacha mara mma Russia - otu pịapụrụ gị
Chọta ịhụnanya na iwulite mmekọrịta adịlarị mfe kemgbe ọrụ mkpakọrịta nwoke na nwanyị malitere ịmalite na ntanetị. Mkparịta ụka mkparịta ụka aghọwokwa ezigbo ngwá ọrụ maka nzube a, na-esonye na netwọkụ mmekọrịta na saịtị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ma n'adịghị ka nke abụọ gara aga, ọ bụ na nkata vidiyo ka ị nwere ike ịhụ anya nke onye na-agwa gị okwu mara mma, ịmụmụ ọnụ ọchị ya ma nwee mmetụta nke enweghị atụ nke mmekọrịta chiri anya ọbụlagodi ọtụtụ narị kilomita.
Enwere obi abụọ? Jikọọ n'efu ma bido kparịta ụka n'etiti ụmụ agbọghọ na nkata vidio anyị ugbu a na-enweghị ịdenye ma dejupụta profaịlụ. Chọrọ kamera kamera naanị iji malite nkata vidiyo nke QMIT. Ma ọ bụrụ na mberede onye interlocutor adịghị ka uto gị - gbanwee gaa na ọhụụ ọhụrụ site na ịpị otu bọtịnụ. Girlsmụ agbọghọ si n'akụkụ ụwa niile na-eche gị ugbu a!